Tag: zvemagariro media utongi | Martech Zone
Tag: yemagariro media hutongi
Sprinklr: Chengetedza Kuendeswa Kwemagariro kune iyo Bhizinesi
Chitatu, Kurume 6, 2013 Douglas Karr
Makambani emakambani ane matambudziko akawanda anoda kuti zvigadzirwa zvavo zvigadziriswe zvakasiyana. Mabhizimusi ekushandisa ane mabasa ekuremekedza, mvumo, kushumwa uye mafashama emabasa, angangoda nzira dzekuongorora kwevemaindasitiri ezvehutano neezvemari, uye vanofanirwa kukwira nenzira kwayo. Mukati mezvemagariro enhau, ichi chinetso chakanyanya nekuda kwedambudziko hombe redhata uye mapuratifomu mazhinji akawanikwa. Altimeter yakaronga Sprinklr seinonyanya kugona kuzadzisa zvido zvemabhizinesi makuru. Econsultancy yakarongwa Sprinklr iyo yepamusoro Enterprise-inokwanisa